Soo galootigu inta badan waa shaqo la’aan 9 sano ka dib | Somaliska
Af-Soomaali / Shaqada & Ganacsiga
Soo galootigu inta badan waa shaqo la’aan 9 sano ka dib
Warbixin uu aruurisay maamulka gobolka Stockholm (Länsstyrelsen) ayaa lagu soo bandhigay in inta badan soo galootiga ay shaqo la’aan yihiin 9 sano ka dib. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in soo galootiga ku nool agagaaraha magaalada Stockholm ay haystaan fursado shaqo oo ka wanaagsan kuwa ku noo qeybaha kala ee Sweden.
56% soo galootiga ayaa shaqo la’aan ah 9 sano ka dib, halka 44% ay shaqo heleen 9 sano ka dib. Soo galootiga ku nool magaalada Stockholm ayaa 54% waxay shaqo heleen 9 sano ka dib. Marka loo barbar dhigo dadka Swedishka ah ayay soo galootiga aad uga hooseeyaan xaga shaqada.
Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay sidoo kale in Soo galootiga horey wax u soo bartay ay dhibaato ku qabaan in ay helaan shaqo u dhiganta waxbarashadooda. Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in mushaarka ay qaataan soo galootiga uu labo jibaar ka hooseeya dadka Swedishka ah.
Ugu dambeyntii ayaa soo saarayaasha warbixinta waxay ku taliyeen in la sameeyo dadaal dheeraad ah oo lagu shaqaaleysiinayo soo galootiga. Waxay sheegeen in shaqo la’aanta Soo galootiga ay dib u dhigi karto guud ahaan bulsho weynta Sweden.
80% Soomaalida ku nool Malmö waa shaqo la’aan
5 200 qaxooti ah ayaa Sweden soo gashay isbuucii hore
Soomaali dhibaato ka haysato lacagta TVga